रोचक – Ap Nepal
काठमाडौँ । ज्योतिषमा ९ ग्रह बताइएको छ भने सबै ग्रहसँग सम्बन्धीत अगल अलग धातु पनि उल्लेख गरिएको छ। कुण्डलीमा यदी कुनै अग्र अशुभ भएमा उससँग सम्बन्धीत उपाय अप्नाउँदा दोषबाट मुक्ति मिल्ने गर्दछ। ग्रह दोष हटाउने उपायमध्ये एक उपाय स्वामी ग्रहर मित्र ग्रहसँग सम्बन्धीत धातु आफ्नो साथमा राख्नु हो। धातुको औँठी बनाएर हातको औँलामा लगाउने वा चेन बनाएर घाँटीमा लगाउन सकिन्छ। आज हामी तपाईलाई कुन राशिका व्यक्तिलाई कुन धातु भाग्यशाली हुने गर्दछ भन्ने बारे जानकारी दिदैछौँ। सुनः गुरु सुनको कारक ग्रह हो। यो धातु मेष, कर्कट, सिंह, धनु र मिन राशिका लागि शुभ मानिन्छ। पितलः पितल धातुसँग सम्बन्धीत ग्रह गुरु हो। जुन व्यक्तिको राशि मेष, कर्कट, सिंह, धनु र मिन हुने गर्दछ, त्यस्ता व्यक्तिका लागि पितल निकै शुभ मानिने गरिन्छ। तामाः यस धातुको कारक ग्रह सूर्य हो। जुन व्यक्तिको राशि मेष, सिंह वा वृश्चिक हुन्छ, त्यस्ता
प्रश्न: मैले बिहे गरेको केही समय मात्रै भयो र मेरो श्रीमान् र म उनको कान्छो भाइ`सँग बस्छौं। भाइ कतै काम गर्दैन र म उस`लाई मेरो भाइ जस्तै व्यवहार गर्छु। उ र म घरमै रहन्छौ। तर केही दिनदेखि मलाई उनी मप्रति आकर्षित भए`जस्तो लाग्छ । एक पटक उनी र म एउटै खाट`मा सुतिरहेका थियौं, जब मलाई थाहा भयो कि उसले मलाई गल`त ठाउँमा छोयो । ऊ सधैं म`लाई हेर्छ र म जहाँ जान्छु मलाई साथ दिने प्रयास गर्छ। अब यी सबै कुरा श्रीमान्लाई कसरी भनूँ ? मैले केही समय अघि बिहे गरेको र अहिले उनीसँग खासै मिलनसार सम्बन्ध नरहेको बताएको छु । यदि मैले उसलाई सबै कुरा बताए भने, के उसले मलाई विश्वास गर्न सक्छ? मनो`वैज्ञानिक नयामत बावा भन्छन् कि यो तपाईंको सम्बन्धको एक धेरै महत्त्व`पूर्ण चरण हो जहाँ तपाईं अझै पनि आफ्नो पार्टनर`लाई बुझ्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरू`सँग विश्वास र समझको सम्बन्ध निर्मा`ण गर्नुहोस्। भाउ`जुको
काठमाडौं । भनिन्छ, मानिसको पहिचान उसको मनबाट गर्नुपर्दछ, तनबाट होइन । साथै उसको पहिचान कपडा हेरेर गर्न हुँदैन । संसारमा त्यस्ता धेरै मानिसहरु छन्, जो धनी भएपनि देखाउन चाहँदैनन् र सामान्यरुपमा नै हिँडिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता मानिसहरुलाई अधिकांशले भि’खारी सम्झिन्छन् र आफ्नो घमण्ड देखाउन थाल्छन् ।यस्तै एउटा घटना एक व्यक्तिको जीवनमा पनि घ’टेको छ । यो घटना थाइल्याण्का एक ठूला बिजनेशम्यानको हो । उनी एक करोडपति व्यक्ति थिए । तर उनलाई पुरानो कपडा मन पर्दथ्यो र उनी त्यहि कपडा लगाएर हार्ले डे’भिडसनको शोरुममा गएका थिए ।त्यहाँ गएर उनले नजिकै रहेको एक मोटरसाईकलको मूल्य सोधे । तर पुरानो कपडा लगाएकै कारण बाइकको बारेमा सोरुममा रहेका व्यक्तिले बोल्न उचित ठा’नेनन् र बाहिर जान बताए । उनले नमानेपछि कर्मचारीहरुलेम्यानेजरलाई बोलाए ।म्यानेजरले पनि उनको कपडाबाट मूल्याङ्कन गरेर उनलाई बाहिर जा भन्दै चि’च्य
एउटा गरिब किसान र उसकी बूढी आमा एउटा पहाडको फेदीमा बस्थे । अन्न उब्जाउनको लागि उनीहरू-संग एउटा सानो टुक्रा जमिन थियो र उनीहरू विनम्र, शान्त र खुसी थिए । उनीहरू बस्ने साइनिंग प्रान्तमा एउटा निरंकुश राज्यपालले शासन गर्थ्यो जो वृद्ध मानिस`हरूको स्वास्थ्यव`स्था र कमजोरी देखेर कायर जस्तै गरी डराउँथ्यो । यसले गर्दा एकदिन उसले एउटा कठो|र घोषणा गर्यो । उसले पूरै प्रान्तका बूढाबूढी`हरूलाई तुरुन्तै मारि`दिनू भन्ने व्यहोराको आ`देश दियो । वास्त`वमा त्यो बर्बरिक काल थियो र बूढा-बूढीहरूलाई म`र्नको लागि एक्लै छाड्नु सामान्यनै थियो । गरिब किसानले भने आफ्नी आमालाई तनमनका साथ माया गर्थ्यो र यस्तो कठो`र हुकुम सुनेर उसको मन वे`दनाले भरियो । तर कसैले पनि राज्यपालको आदेशलाई नकार्न सक्दै`नथ्यो । त्यसैले उक्त नौजवानले आफ्नी आमा`लाई त्यो समयमा सबैभन्दा दयालु मानिने मृ`त्यु दिनको लागि तयारी गर्यो । सूर्यास
काठमाडौं । एक जना प्रयोगकर्ताको खल्तीमै मोबाइल फोन पड्किएको छ । यो घटना भारतको राजधानी दिल्लीको हो । एक जना अटो ड्राइभरको गोजीमा रहेको ओप्पो ए ५३ स्मार्टफोन पड्किँदा उनी घाइते भएको समाचार छ । घटनाबाट घाइते भएका व्यक्तिसँग गरेको कुराकानी एक युट्युवरले सार्वजनिक गरेका छन् । बताइए अनुसार आफ्नो खल्तीमा मोबाइल राखेर उनी अटो चलाइरहेका थिए । तर अचानक खल्तीबाट धुँवा उड्न सुरु भयो र हेर्दा हेर्दै फोनमा आगो लाग्यो । भिडिओ अन्तर्वार्तामा ती व्यक्तिले बताए अनुसार अचानक आगलागी हुँदा उनी आँत्तिन पुगे र जसका कारण उनको अटो दुर्घटनामा पर्‍यो । घटनाबाट उनको दुवै खट्टामा चोट लागेको छ । टेक्निकल दोस्त नामक युट्युब च्यानलमा ४ जुनका दिन राखिएको भिडिओ अनुसार दिल्लीमा बस्ने ती अटो चालकले प्रयोग गर्ने ओप्पो ए ५३ स्मार्टफोनमा आगलागी भएको हो । भिडिओमा ती व्यक्तिले यस घटनाको बारेमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गर
अहिले को’रोनाबि’रुद्धको भ्याक्सिनले मान्छेको शरीरलाई चु’म्बकी’य बनाउने र शरीरमा चम्चा लगायतका बस्तुहरु टाँ’सिने गरेका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएका छन् । तर विज्ञहरुले को’रोनाबि’रुद्धको भ्याक्सिन लगाएपछि शरीर चु’म्बकीय हुने कुरालाई अस्वीकार गरेका छन् । अमेरिकन सीडीसीले पनि भ्या’क्सिन लगाएपछि मान्छेको शरीर चु’म्बकीय भएकाले सिक्का वा चम्चा जस्ता बस्तु टाँ’सिने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । सीडीसीले भनेको छ – ‘को’रोनाबि’रुद्धको खोप लगाउँदा तपाईको शरीर चु’म्बकीय हुँदैन । खोप लगाएको ठाउामा चु’म्बकीय क्षेत्र उत्पादन गर्नसक्ने कुनैपनि सामाग्री खोपमा समावेश छैन । को’रोनाबि’रुद्धका सबै खोपहरु फलाम, नि’केल, कोबाल्ट, लिथियम र दु’र्लभ पृथ्वी मिश्रित धातुबाट मुक्त छन् ।’सीडीले थप प्रष्ट पारेको छ – ‘को-भि’ड १० खोपहरु मा’इक्रोइलेक्ट्रोनि’क्स, इ’लेक्ट्रोड, का’र्बन ना’नोट्युबहरु र ना’नोवायर स
बलिउड की चर्चित अभि’नेत्री ‘शिल्पा शेट्टी’का पति ‘राज कु’न्द्रा’ देश विदेशमा कहलिए’का व्यक्ति हुन् । तर कु’न्द्रा लाई भारत’मा धेरैले बिज’नेश म्यान भन्दा पनि शिल्वा शेट्टी’को पतिका रूपमा चिन्ने गर्दछ’न् । उनको विज’नेश विश्व’भर फैलिएको छ । राज कु’न्द्राले नेपाल’मा सल बे’चेर आफ्नो व्यव’साय सुरु भएका थिए । कुन्द्रा आज एक सफल बिजनेश’म्यान को रूपमा परिचित रहेका छन् । इन्टरनेटमा पा’एका जानकारी अनुसार हाल उनी सँग २४०० करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ ।एक अन्त’र्वार्तामा राज कुन्द्राले भने’का थिए,‘ आज म जुन सुख सयलको जिन्दगी बाँचिरहेको छु सानो छँदा ठीक उल्टो जिन्दगी बाँचि’रहेको थियो।’ आज उनी’सँग महँगा कारहरु रहेका छन् । जुन सानो छदाँ धे’रैको सपना हुने गथ्र्यो । १८ वर्षको उमेर’मा उनले आफ्नो बिज’नेश सुरु गरेका थिए । मिडल क्लास परिवारमा जन्मिएका उनीलाई माता पिताले निकै कठिन तरिकाले पाले’का थिए । उन
कतै तपाईं`को चोरी गर्ने बानी त छैनरु चोरी गर्ने बानी एक किसिमको मानसिक रोग हो । यस रोगबाट पी`डित रोगी साधारण चोरको जस्तो समाजकोलागी खतरा या घातक हुँदैनन् । किनभने ऊ कुनै व्याक्तिगत फाईदा या जीवनयापनको लागि भनेर चोरी गर्दैन । अक्सर यस्ता मानि`सहरु साधन सम्पन्न हुन्छन् र त्यतिकै आत्मसन्तुष्टीको लागीमात्र आफूलाई मनपरेको सामान चोरी गर्ने गर्दछन् । जुनवस्तुको वास्तवमा उनिहरुलाई आवश्य`कता पनि हुँदैन । चोरी गरिसकेपछि यिनिहरुलाई एककिसिमको आनन्दको अनुभुति हुन्छ । पुरुष`हरुको तुलनामा महिलाहरुमा यस किसिमको चोर्नेबानी बढी नै हुन्छ । कानूनि कार`वाई तथा लोक`लाजको डरले गर्दा मानिस यसको उप`चार गराउन मान्दैनन् र पन्छिने गर्छन् । यसको मुलभुत समस्या भनेको रोगी स्वंय आफूलाइ कन्ट्रोल गर्न सक्दैन । नत स्वंय आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्छन् । यस बानीले यिनिहरुलाई आत्मग्लानि, डर, स्वंय`लाई दोषी मान्नु, भित्